« Prev1234..............165316541655Next »
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Ka Hadlay Qaraxyo Kadhacay Magaalada Muqdisho.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa cambaareeyey qaraxyada saaka ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, kuwaasoo ka kala dhacay agagaaraha Warshadii hore ee Nac-naca oo fariisin u ah ciidamo ka tirsan kuwa XDS iyo qaraxa labaad ee lala beegsaday hotelka Wehliye.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado inay jiraan weli kooxo nabadda diidan isla markaana u ooman daadinta dhiiga shacabka.
“Waxaan aad uga xumahay falalkan qaraxyada ah ee lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed, waxaana ballan qaadayaa inaan xoogeena isugu geyn doono sidii aan gacan adag ugu qaban laheyn kooxahaan u ooman daadinta dhiiga shacacabka ah” ayuu yiri R.wasaaraha oo xusay in xukuumadiisu ay muhiimad gaar ah siin doonto sidii looga hortagi lahaa falalkan inay sii socdaan, lana xassiliyo dalka guud ahaan.
Gabagabadii, Ra’iisal Wasaaraha ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelada ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku dhintay qarxyadaasi, wuxuuna alle uga baryay inuu janadiisa geeyo.
—-DHAMMAAD—- read more... MUQDISHO : Toban qof ayaa ku geeriyootay markii laba qarax uu ka dhacay
Ku dhawaad 10 Qof ayaa geeriyootay tiro intaa ka badana waa ay ku dhawacmeen qarax baabur loo adeegsaday oo Maanta ka dhacay agaagarka Hotel Wehliye ee Magaaladda Muqdisho.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa u badnaa dadkii gacansiga ku lahaa halka uu qaraxa ka dhacay iyo kuwo kale oo marayay wadada oo ku jirtay xiliyadii ugu mashquulka badnayd
Dhanka KALE Qaraxa ka dhacay Degmada wadajira gaar ahaan ilinka hore ee Warshada NacNac oo lagu tababaro Ciidanka Miliriiga Dowlada Federaalka Soomaalia ayaa waxa ku dhintay qofkii gaariga waday halka saddax kale oo shacab ahna ay ku dhawacmeen read more... Dhawacyo la gaarsiiyay Isbitaalka Madiina
Mamulka Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho ayaa faahfaafin ka bixiyay dhaawacyada , dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay Magaaladda Muqdisho.
Dhaqaatiirta Isbitaalka ayaa sheegay in 4, Qof dhawacii soo gaaray ay u geeriyoodeen halka tirade kalana ay ku hayaan dabiib caafimaad.
Dhabnka kale waxa soo hagagaysa xaaladda Caafimaad Wariye Xamiid Karazayi oo ka tirsan Telefishanka Universal oo shalay ku dhawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa. read more... Caruur Nafaqo daro ugu geeriyootay gobolka Sool
Shan Qof ayaa lagu soo waramayaa in xanuunka Jadecada ay ugu geeriyoodeen Degaano ka tirsan Gobolka Sool.
Inta badan dadkan Jadeecada soo riday ayaa u badnaa caruur da’ ahaan ka yar shan sano, waxana ku jira caruur walaal ah.
Dhaqaatiirka Isbitaalka Gobolka Sool ayaa sheegaya in ay ka wal wal qabaan xaaladda caruurta cudurada uu soo ridanayo ee samaysay abaaraha ka jira dalka. read more... Puntland : Xal ayaa laga gaaray ciidan gadood sameeyay
Waxgaradka Gobolka Nugaal ayaa xal ka gaaray gadood maalmo ka hor ay sameyeen Ciidan ka tirsan Maamulka Puntland.
Sidii wax loogu qaban lahaa arintan waxa waayadan ku hawlanaa Saraakii iyo Cushaada Gobolka Nugaal.
Ciidankan ayaa qabsaday intii godoodka mushaar la’aanta ay ku jireen kantaroolka Magaaladda Garoowe ee xaruunta Puntland. read more... « Prev1234..............165316541655Next » Special Info